सेवा सोधिने प्रश्न - AlorAir
Dehumidifiers कसरी काम गर्छ?
Dehumidifiers हावा बाट चिस्यान निकाल्न र ताप द्वारा वाष्प गर्न पहिलो हावा परिवर्तन गर्न सक्छन् जो एक सुन्दर र गर्मी एक्सचेंजर यसलाई राख्न। त्यसपछि संघनक ट्यूब मा वाष्प सानो पार्नु बनाउन। पछिल्लो मा, condensate पानी लिन नगरेर वाहिनी द्वारा दूर छ।
मेरो dehumidifier काम गर्दैन, म के गर्न सक्छ?
1)। तापमान दायरा जाँच र प्लग ठीकै सम्मिलित गरिएको छ निश्चित गर्नुहोस्।
2) .यात्रा www.alorairsolutions.com र आफ्नो प्रश्न दर्ता गर्न निःशुल्क दर्ता सोधिने प्रश्न सिस्टम प्रविष्ट गर्नुहोस्। हाम्रो सेवा विभाग सम्पर्क र तुरुन्तै समाधान प्रदान गर्नेछ।
3)। तपाईं पनि एक ई-मेल AlorAir सेवा विभाग थप जानकारीको लागि ठेगाना sales@alorair.com द्वारा पठाउन सक्नुहुन्छ। वा तपाईंले 888-990-7469 मा स्थानीय वितरक वा AlorAir सेवा विभाग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ थप जानकारीको लागि
म एकाइ कार्य गर्दा ठूलो सोरले के गर्नुपर्छ?
पहिले, एकाइ फ्लैट र दृढ जमीन मा कार्य भएको निश्चित गर्नुहोस्। दोश्रो, यो जाम छैन निश्चित गर्न फिल्टर जाल जाँच गर्नुहोस्। फिल्टर जाल जाम छ भने, यसलाई लिन र सफा गर्नुहोस्।
म मेरो नियन्त्रण प्यानल readout कोड केही प्रकारको रही छु। त्रुटि कोड को सूची म कहाँ पाउन सक्छौं?
त्रुटि कोड (पनि उत्पादन स्रोतहरू, नियमावली अन्तर्गत www.alorairsolutions.com मा उपलब्ध) मालिकको मार्गदर्शन देखि पाइएको गर्न सक्नुहुन्छ। अन्य शङ्का लागि, हामीलाई 888-990-7469 मा एक कल दिन गर्नुहोस्।
को AlorAir dehumidifier को सेवा जीवन के हो?
एकाइ सेवामा जीवन 8 वर्ष वा धेरै अन्य अवस्थामा हुन सक्छ।
के सुरक्षा प्रमाणपत्र (इस्वी संवत्, ETL, कैसीनो, आदि) AlorAir उत्पादनहरु बोक्न गर्छन्?
हाम्रो मोडेल केही ETL, इस्वी संवत् र ऊर्जा तारा प्रमाणीकरण बोक्न।
मेरो AlorAir उपकरण लागि मार्गदर्शन म कहाँ पाउन सक्छौं?
तपाईं हाम्रो वेबसाइट मा मुद्रण योग्य मार्गदर्शन पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईं यसलाई डाउनलोड गर्न असमर्थ हुनुहुन्छ भने, 888-990-7469 मा AlorAir सेवा विभाग सम्पर्क गर्नुहोस्। हामी फ्याक्स वा तपाईं कुनै शुल्क मा प्रतिस्थापन इमेल गर्न सक्नुहुन्छ।
त्यहाँ हिउँदमा dehumidifier भण्डारणको लागि कुनै पनि महत्वपूर्ण अंक हो?
हिउँदमा Dehumidifiers भण्डारण अघि, सबै पानी एकाइ देखि बाहिर भोकमरी भएको निश्चित गर्नुहोस्। यसबाहेक, नाली ट्यूब मा पानी खुर रोक्न बाहिर भोकमरी गरिएको निश्चित गर्नुहोस्। को एकाइहरु weatherized छैन, त्यसैले तिनीहरू बाहिर राखिएको गर्न सकिन्छ।
मेरो AlorAir उत्पादन सेवा प्रदान म कहाँ प्राप्त गर्न सक्छन्?
अक्सर आफ्नो एकाइ एक प्रमाणित एचभिएसि टेक्नीसियन द्वारा सेवा प्रदान गर्न सकिन्छ; तपाईं पनि एकाइ सेवा हामीलाई फिर्ता डेलिभर गर्न सक्नुहुन्छ। कृपया प्रक्रिया कसरी सुरु गर्न जान्न 888-990-7469 मा हामीलाई कल।
AlorAir फर्कने नीति के हो?
कृपया वेबसाइट www.alorairsolutions.com मा AlorAir फर्कने नीति बुझाउँछ।
म मेरो उपकरण कसरी जहाज गर्नुपर्छ?
हामी FedEx एक्सप्रेस रक्षक द्वारा एकाइ किनमेल गर्न सिफारिस गर्छौँ।